Soo degso Dornier Do28A-1 Cassic Wings FSX - Rikoooo
downloads 6 957
Laba daydo SAMAYN-28A-1 iyo SAMAYN-28A-1S tayo weyn leh qaabab 6 iyo qol dalwaddii fiican (VC). Tani mataanaha-engine si fudud ka heli doontaa meel aad katabaan.
Do 28 mataanaha-engined waxaa horumariyo 1950s goor dambe oo ku salaysan hal-engined Do 27. Waa in la qorsheeyay sidii garabka ah garabka sare monoplane oo muujinaya qalabka wiishka iyo gadaalka dambe ee qol ah (hurdada dadka 6) iyo dabada ee 27 Do ah. Lycoming oo ay lugaha ka marsho ugu weyn ee ka degaya Labada ayaa dardargelisay set of baalal hooseeyo. Like 27 Do ah, Do 28 waxaa kala duwanaayeen ay xawaaraha sare safar, ay diyaarad-xawaaraha hoos u fiican iyo sifooyinka STOL of tracks diyaar u kooban. Duulimaadka ugu horeeya ee 28 C A qalabeeyey laba hp iyo daab propellers Lycoming 0-540 255 dhacay 20 March 1960 in Oberpfaffenhofen. The Do 28 B hantiyeen isaga, Lycoming IO-540 in 290 hp iyo propellers saddex-wada dagan. The DO 28 C ahaa version siddeed kursi la laba turboprop hp 560 on geedka oo horumarka la dhameystirin. Wadar ah 120 nooca diyaaradaha C 28 A iyo B ayaa la sameeyey. Qaar ka mid ah qalabka ay weli duulaya Africa iyo South America.
Xidhmada Howard 250 Trigear FSX & P3D 1.0